ဘယ်ဘာသာစကားနဲ့ ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ သဘောမတူကြောင်းကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောလိုတဲ့ အခါ အသုံးပြုတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းတွေကို ဘယ်လို အသုံးပြုရတယ်၊ ဘယ်အခါမှအသုံးပြုရတယ် ဆိုတာကို သိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘာသာစကားတစ်ခု (သို့) ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုမှာ စကား အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဟာ ပုံမှန်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပေမယ့် အခြားဘာသာစကား (သို့) ယဉ်ကျေးမှု အတွက်တော့ မယဉ်ကျေးသော အသုံးအနှုန်းဖြစ်နေနိုင်လို့ပါပဲ။
I’m sorry, Excuse me (သို့) Pardon me ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေဟာ အချက်အလက်တောင်းဆိုခြင်း၊ အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့် သဘောမတူခြင်း အစရှိတဲ့ မတူညီသော အခြေအနေ အမျိုးမျိုးတွင် ယဉ်ကျေး ခြင်းကို ဖော်ပြရာမှာသုံးနိုင်သော အသုံးအနှုန်းများ ဖြစ်ပါတယ်။
– Sorry / Excuse me, do you know what the time is? (တစ်ဆိတ်လောက်၊ ဘယ်နှစ်နာရီလဲဆိုတာ သိပါသလား?)
– I’m sorry, but I don’t see how you expect us to finish by lunch time. (စိတ်မရှိပါနဲ့ခင်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး (ကျွန်တော်တို့ကို) ထမင်းစားချိန်အမီ (အလုပ်တွေကို) အပြီးလုပ်စေချင်တယ် ဆိုတာကို သဘောမပေါက်ဘူးဗျာ။)
– Excuse me, but I never said I’d pay for everything. (အားတော့နာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးအတွက် ငွေရှင်းပေးမယ်လို့ ကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှ မပြောခဲ့ပါဘူး။)
– Excuse me, but there’saphone call for you. (ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားအတွက် ဖုန်းလာနေပါတယ်။)
– Excuse me foramoment, I have to makeaphone call. (ခဏလောက် ခွင့်ပြုပါဦး။ ကျွန်တော် ဖုန်းခေါ်စရာလေး ရှိလို့ပါ။)
– Pardon me, but those numbers aren’t right. (စိတ်မရှိပါနဲ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဂဏန်းတွေက မမှန်ဘူး။)
– Pardon me for interrupting, but there’saphone call for you. (နှောင့်ယှက်မိတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားအတွက် ဖုန်းလာနေပါတယ်။)
I’m sorry, Excuse me နဲ့ Pardon me တို့ကို တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သူပြောလိုက်တဲ့ စကားကို နောက်ထပ်ပြန်ပြောဖို့ ယဉ်ကျေးစွာ တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာလည်း အသုံးပြုပါတယ်။
Excuse me နှင့် Pardon me တို့ကိုတော့ အမေရိကန်စကားမှာ အဓိက အသုံးပြုပါတယ်။
– Is this your coat? Excuse me/ Pardon me? (ဒါခင်ဗျားကုတ်အင်္ကျီလား? ခင်ဗျား/ပြန်ပြောပါဦး။)
– I’m sorry , what was your name again? (စိတ်မရှိပါနဲ့။ ခင်ဗျားနာမည် ပြန်ပြောပါဦး ။)
သင့်အနေနဲ့ ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်ဖို့ရာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဘေးဖယ်ပေးဖို့ ယဉ်ကျေးစွာ တောင်းဆိုတဲ့အခါ Excuse me နှင့် Pardon me တို့ကို အသုံးပြုပါတယ်။ Excuse me ဟာ ဗြိတိသျှစကားအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပြီး Pardon me ကတော့ အမေရိကန်စကား အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
I don’t know, I see/take your point နဲ့ That’s true တို့ကိုတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ အပြည့်အဝ မဟုတ်ဘဲ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာ သဘော မတူကြောင်း ကို ပြောလိုတဲ့ အခါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
– It’ll be boring. Oh, I don’t know. It might be fun. (အဲဒါက ငြီးငွေ့စရာကောင်းလိမ့်မယ်။ အို မသိဘူးလေ၊ ပျော်စရာကောင်းချင်လည်း ကောင်းမှာပေါ့။)
– I see your point , but I don’t think there’s anything we can do at the moment. (ခင်ဗျားပြောတာကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုလောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘူး ထင်တယ်။)
With (the greatest) respect, with all (due) respect နဲ့ I beg to differ တို့ကတာ့ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ သဘောမတူကြောင်း ပြောတဲ့အခါမှာ အလွန်ယဉ်ကျေးပြီး ခန့်တဲ့ အသုံးအနှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
– With all due respect, you’re missing the point. (လေးစားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားနားလည်မှု လွဲနေပါတယ်။)
– He argues that young people would benefit from parenting courses, I beg to differ. (လူငယ်တွေဟာ သားသမီးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးသင်တန်းတွေကနေ အကျိုးကျေးဇူးရနိုင်တယ်လို့ သူကတော့ စောဒက တက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သဘောမတူကြောင်း ပြောပါစေခင်ဗျာ။)
Actually ကိုတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သူနဲ့သဘောမတူကြောင်း ယဉ်ကျေးစွာပြောလိုတဲ့အခါ (သို့) ထိုသူကို အမှန်ပြုပြင်ပေးလိုတဲ့အခါ အသုံးပြုပါတယ်။
– I find Jamesabit dull. (ဂျိမ်း(စ)က နည်းနည်းတော့ ငြီးငွေ့ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။)
He’s actually very nice when you get to know him. (သူနဲ့ ရင်းနှီးလာတဲ့အခါ သူဟာ တကယ်တော့ သဘောကောင်းတဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။)
– That Picasso is amazing. (အဲဒီ ပီကာဆိုရဲ့ ဒီပန်းချီကားက အံ့သြစရာကောင်းလိုက်တာ။)
Actually it’s by Braque. (တကယ်တော့ အဲဒါ ဘရက်(ခ) ဆွဲတာ။)
I’m afraid ကတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်စေမယ့် (သို့) စိတ်ပျက်စေမယ့် (သို့) စိတ်အနှောင့် အယှက်ဖြစ်စေမယ့် စကားကိုပြောရာတွင် အသုံးပြုသော ယဉ်ကျေးတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
– Things haven’t been going well here, I’m afraid. (စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒီမှာတော့ အရာရာတိုင်းဟာ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတယ်။)
– I’m afraid that I can’t accept this job. (စိတ်မကောင်းပေမယ့် ဒီအလုပ်ကို ကျွန်တော် လက်မခံနိုင် ပါဘူး။)
– I’m afraid to say that I found the book very dull. (အားနာပေမယ့် စာအုပ်က ပျင်းစရာကောင်းတယ်လို့ ပြောရမှာပဲ။)
– Did the forget to do it? I’m afraid so. (သူလုပ်ဖို့မေ့သွားသလား? စိတ်မကောင်းပေမယ့် ဟုတ်ပါတယ်။)
– Will John be there? I’m afraid not. (ဂျွန်ရောအဲဒီမှာ ရှိမှာလား? စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။)
Macmillandictionaryblog.com မှ Liz Potter ၏ Ways of being polite မှ ကောက်နုတ် ဘာသာပြန်ဆို ထားတာဖြစ်ပါတယ်။